isixeko : Bayreuth
Zifumaneke : 1975
abafundi (nama.) : 11000
Musa ukulibala ukuba discuss University of Bayreuth
Wamkelekile kwiYunivesithi Bayreuth. Ukucinga zisebenza ngamazwe ifune nje engomnye yeeyunivesithi linomtsalane eBavaria kwaye ukuhlala izikhundla eziphezulu ekufundiseni kazwelonke kunye namazinga uphando. Ngesi sizathu, sizibekele iithagethi zophuhliso kunyaka 2020 ukuze balole ngakumbi kwiYunivesithi yeprofayili eyodwa Bayreuth kunye nokhuphiswano ngohlangothi:
Enkosi kwi uluhlu zalo zahlukeneyo lwamacandelo kunye iinkalo ekujoliswe ngokwesicwangciso ekhethiweyo, kwiYunivesithi Bayreuth eyaziwa nevunywa kumazwe ngegalelo zophando kwaye inikeza imeko obalaseleyo kwisifundo.
IYunivesithi Bayreuth yenye kwiindawo ekhokelayo eJamani ngokubhekiselele kuphando kunye umgangatho wabafundi balo.
IYunivesithi Bayreuth baneshologu-ubungakanani nakwiiyunivesithi nto Sizimisele ukuba kwelona zinga liphezulu emfundo kwaye wenze umgudu ukuze ngokwayo ngaphandle kwiiyunivesithi ezinkulu.
Njengenye zeeyunivesithi omncinci Germany ngayo, bakwazi ukusebenza ngendlela engakhethe thina, ukuzithemba nomoya nenkululeko kwezemfundo, inkqubela yenzululwazi, kunye noxanduva lwasekuhlaleni. In line with our vision, eziphambili zethu phezulu kweliso ngamnye, nokugcina imigangatho ephakamileyo zemfundo, and creating programmes of study that take current research into account. Our interdisciplinary focus and the innovative collaboration between many of our disciplines are key features of Bayreuth’s research culture.
ngoqwalaselo, ngoku Kwakucacile indlela iciko umva 1975 ukuseka eyunivesithi esekelwe yokudibanisa zezifundo ngamandla ngophando ezixuba nokufundisa. Le mibuzo ejongene uluntu lethu hlabathi baba ngakumbi ezintsonkothileyo. Iimpendulo kunene inokufumaneka kuphela kufutshane, intsebenziswano cross-disciplinary - enye asethi yeYunivesithi eziphambili. IYunivesithi Bayreuth iphawulwa nenkululeko kwezemfundo, inkqubela yenzululwazi, nokufaneleka aluncedo, zonke ezo siyiqonde kwimeko yoxanduva yentlalo nenkcubeko.
Wamkelekile kwi zethu omnye-of-a-nobubele kwikhampasi.
Oko kukuthi intliziyo iYunivesithi ngumthombo inkuthazo. Oku kulapho wenza ubuhlobo ukuba, intsebenziswano iqalwa, kunye neengcinga ukhawule, ekuqinisekiseni ukuba kwiyunivesithi yethu uhlala njengemqondiso ezintsha. exchange Scientific akundincedi lukhulu iintlobo ngeentlobo lwamacandelo kwikhampasi yethu ngokunxibelelana lidibanisa. Yiloo nto mhlawumbi kwiYunivesithi Bayreuth iye yakwazi ukubhiyozela amabhaso ezininzi kangaka honours ngezinto zalo lwezifundiswa.
... Kwaye Bayreuth mbindini. Njengoko abemi ngeenxa 73,000, Bayreuth ayinkulwanga ingakumbi, kodwa yenye yezinto ngayo yenza umdla kangaka. Abantu kugagana omnye komnye. Kwidolophu isenokuba kwihlabathi-yayidume emthendelekweni wayo opera yonyaka, kodwa ukwanika abafundi nabaphandi nobutyebi ezinika yenkcubeko nezobugcisa, Wagner bucala. Kufuneka beze akumangalisi ukuba iqela pub ekhusini kwilizwe dolophu uk- ezandleni abafundi. Kodwa uya kumangaliswa ukuba nako ukufumana indlela yakho jikelele indlela ngokukhawuleza njengoko phawula imida phakathi zekhampasi wedolophu awekho kwaye nakala kancinci. Oku kuba nje kuba emva kwexesha elifutshane kuphela kukho ubuso Kwakuqhelekile mbombo.
Indawo yiyo yonke.
YeMbonakalo kumantla eBavaria, ekunene buphambi Bayreuth ngayo, lukhulu kwizinto zemidlalo: weebhayisekile, yokuhambela, intaba-ndinyuke, ngesikhephe, ukuqabela, kwaye ekhephini zonke iindlela ezigqwesileyo ukuqhamisa ixesha lokuphola. kunjalo, Ukuba ayenzeki sanqwenela nokuphosa isixeko ezinkulu ngoku uze, Nuremburg kuphela iyure-ngololiwe kude kwaye Munich kuphela 2 ½ iiyure kude. Uyakwazi ukufikelela eBerlin kwi 4 iiyure ngemoto, ELeipzig kwisiqingatha xesha. Kwaye musa ukulibala: ngokuba intliziyo Europe kuthetha Prague kwakhona kuphela drive iiyure ezintathu kude.
Biology, Neyezinto Earth Sciences
uMthetho, Ishishini kunye Economics
Uyafuna discuss University of Bayreuth ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
iifoto: University of Bayreuth ezisemthethweni kwiFacebook